Warshadda Qalabka Sheybaarka | Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Sheybaarka Shiinaha
SHINVA waxay bixin kartaa noocyo kala duwan oo ah alaabada barbaarinta jiirka, oo ay ku jiraan IVC, cabirro kala duwan oo baqashada iyo rack iwm.
Sterilizer miiska dushiisa
l Iyada oo la adeegsanayo faakiyuumka garaaca wadnaha, faakiyuumka kama dambaysta ahi wuxuu gaadhayaa wax ka sarreeya 90kPa, heerka S ma leh hawl sidan oo kale ah
BWS-M-G360 mashiinka buuxinta dhalada biyaha si otomaatig ah
Biyaha nadiifka ah ee lagu daaweeyo nidaamka nadiifinta biyaha shaybaarka xoolaha ayaa si aan kala go 'lahayn ugu xiran mashiinka buuxinta dhalada biyaha la cabbo ee maraya dhuumaha nadaafada si looga hortago infekshanka labaad ee tayada biyaha;
Kalasooca digaagga BSE-l digaagga digaagga iyo cadaadiska xun ayaa ah qalabkii ugu dambeeyay ee ay soo saartay shirkadeena digaagga taranka, taranka SPF iyo fayraska tijaabooyinka daawooyinka.
BSE-IS jiirka taxanaha ah iyo jiirka kalluumeysiga jilicsan ee jilicsan ayaa ah qalab gaar ah oo loogu talagalay taranka SPF ama jiir nadiif ah iyo jiirka jawiga caadiga ah ama jawiga caqabadda leh. Waxaa loo isticmaalaa taranka iyo injineernimada hidaha iyo jiirka.
Bixi xalal kala duwan oo wax soo saar ah oo loogu talagalay xayawaanka waaweyn, waxayna ku siin karaan barnaamijyo taran otomaatig ah iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah ee isticmaalayaasha;
Taxanaha BDS-H ee faafinta jeermiska hydrogen peroxide wuxuu isticmaalaa gaaska hydrogen peroxide sida jeermiska iyo jeermiska jeermiga. Waxay ku habboon tahay in la nadiifiyo gaasaska meelaha xiran, sagxadaha dusha sare iyo qalabka.
Kala soocida qalliinka
Jiirka iyo jiirka kala-soocida qalliinka ayaa ku habboon xarumaha xayawaannada shaybaarka, machadyada karantiillada, shirkadaha dawooyinka cimilada, qaybaha caafimaadka iyo caafimaadka, iwm.
Taxanaha BSP-C Qalabka qashinka gogosha qashinka
U adeegso silsiladda farsamada xiran ama mabda'a faaruqa ah si aad sariirta cusub uga qaaddid qolka keydka una geyso meesha dheeriga ah, ama ka qaad sariirta qashinka aagga aruurinta una soo qaad aagga daweynta bartamaha.
BIST-WD taxanaha ah ee qalabka cabitaanka xoolaha ee biyo nadiifinta
Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada jeermiska looga dhigo heerkulka aadka u sarreeya, biyaha cabbitaanka xoolaha ee hannaanka kuleylka ee deegaanka heerkulka sare iyo joogteynta jeermiska jeermiska, la dilo dhammaan noolaha ku jira biyaha, si loo gaaro nadiifin dhammaystiran oo biyo cabidda xoolaha ah;
Dog iyo qafis doofaar
Bixi xalal kala duwan oo wax soo saar ah oo loogu talagalay xayawaanka waaweyn, waxaadna ku siin kartaa barnaamijyo taran otomaatig ah iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah ee isticmaaleyaasha
Otomatiga heer-sare ah si loo yareeyo kharashka socodka.
Ku darista quudinta, bixinta biyaha la cabbo iyo saxaro iyo kaadi tuurista dhammaantood waa otomaatig. Foosha oo yaraata iyo hawlgal fududaan oo isla qaddarka taranka ah.